20 / 11 / 2020 21 / 11 / 2020 ဂရေဟမ် 2832 Views စာ0မှတ်ချက် 2021, 60275 ရဲတပ်ဖွဲ့ရဟတ်ယာဉ်, 60276 အကျဉ်းသားပို့ဆောင်ရေး, 60279 မီးဘေးအန္တရာယ်ထရပ်ကား, 60280 မီးသတ်လှေကား, 60281 မီးဘေးကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဉ်, 60282 မီးသတ်စစ်ဌာနချုပ်ယူနစ်, 60283 အားလပ်ရက် camper ဗန်, 60284 Roadwork Truck ကား, 60285 အားကစားကား, 60286 သဲသောင်ပြင်ကယ်ဆယ်ရေး ATV, 60287 ထွန်စက်, 60288 လူမျိုး Buggy Transporter, 60289 Airshow ဂျက် Transporter, 60290 စကိတ်စီးခြင်းပန်းခြံ, 60291 ခေတ်သစ်မိသားစုအိမ်, 60292 မြို့စင်တာ, 60304 လမ်းမကြီးပြား, City, Lego CIty
အဆိုပါ Lego City ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စတင်မည်
အသစ်လှိုင်း Lego City စုံတွဲများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်စတင်မည် ဗန်ဒါ Meulen အားဖြင့်ပြောက်သောရုပ်ပုံများ, ထုတ်ဝေခဲ့သည် အုတ်ဖို.
ပုံမှန်အားဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံး Lego City ယခုနှစ်လှိုင်းလုံးများသည်အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအာရုံစိုက်သည်၊ သို့သော်ယခုတစ်ခေါက်တွင်အထွေထွေဘဝအကြောင်းအရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည့်အကွက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဤလှိုင်းသည်လယ်ထွန်စက်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးယာဉ်များနှင့်အပန်းဖြေမှုအခြေပြုမော်ဒယ်များပါ ၀ င်သည်။ အကွာအဝေးအတွင်း, အစုံအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောအဆောက်အ ဦး အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ 4+ မော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါအစုံဇန်နဝါရီလ 2021 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိရန်မျှော်လင့်ရသည်။
ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် 2021 အစုံပါဝင်သည် LEGO Art, Friends, DOTS, Ninjago, ဖန်ဆင်းရှင်, နည်းပညာ နှင့် City.
← LEGO Technic 2021 အစုံကဖော်ပြသည်
LEGO VIP အချက်နှစ်ချက်ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည် →